☆☆ဂီတ x serendipity အသစ်ထောင့် [သွားလေ၏ - စစ်ကိုင်းခရီးစဉ် - တနင်္ဂနွေ၊ စစ်ကိုင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလှန်လှော] 🎵 ဒီနေ့ငါ Saga Prefecture ရှိ Takeo City Tourism Association မှ Shizuko Owatari နှင့်ဖုန်းခေါ်သည်။ Takeo ၏ထုတ်ကုန်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် (တနင်္ဂနွေ) နှင့် Takeo City ယဉ်ကျေးမှုခန်းမ၌ (၁၇) (Sun) ❗ "Mifuneyama Rakuen-2019 Autumn Leaves Festival-" 11/8 (Fri) မှ 12/8 (Sun) တွင်ကျင်းပမည်။ ) “ Zhuzhou ဥယျာဉ်ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်ပွဲတော်” ကို ၁၂/၈ အထိ (Sun) အထိကျင်းပသည်။
လွန်ခဲ့သော ၅ ရက် က
အမှတ် ၁၄.၃၃၀ [LOVE FM ရေ "GO !! Saga ၏တနင်္ဂနွေနေ့များစစ်ကိုင်းသို့ထွက်ခွာခြင်းအကြောင်းကိုသတင်းပေးပို့ခြင်း]] Saga စီရင်စုသို့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအားမြှင့်တင်ရန်အတွက် PR စီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့် Takeo သည် LOVE FM ၏“ GO !! Saga Travel-Weekend, Saga to Outing Information” တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ လူကြိုက်များသောဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Mifuneyama Rakuen ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်ပွဲတော်၊ ...
အမှတ် ၁၄.၂၂၉ [ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်ပွဲတော်အတွက်အချက်အလက်များ] နံနက်ခင်းနှင့်ညနေပိုင်းများတွင်အေး။ ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်များသည်မြို့၏လှပသောရာသီများ၌ရှိသည်။ နို ၀ င်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ Zhuzhou ဥယျာဉ်၌“ ဆောင်း ဦး အရွက်ပွဲတော်” ကိုကျင်းပသည် 《 Showa Kobori Enshu》 Nakane Kinsaku, ဥယျာဉ်လေး။ ပန်းခြံတွင်သို့မဟုတ်တောင်များနောက်၌စိုက်ထားသောဂျပန်မေပယ်ပင်များသည်ရောင်စုံဆောင်းရွက်များရှိပြီးအနီရောင်နှင့်အဝါရောင်အရွက်များသည်တောက်ပတောက်ပ။ လွမ်းဆွတ်မှုအချို့ကိုဖြစ်စေသည်။ ...
အမှတ် ၁၄.၂၈၈ [“ Takeo City Tourism Association” ၏ဓာတ်ပုံ Picureco] “ Takeo City Tourism Association” ၏ Picreco ပြခန်းကို Saga Prefecture၊ Takeo City ၏ဆွဲဆောင်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ Picureco သည်အမြဲတမ်းပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကစတိုးဆိုင်တစ်ခုချင်းစီသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်အခမဲ့တပ်ဆင်နိုင်သောဓာတ်ပုံပြခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေစဉ်သုံးစွဲသူများထံမှစီးပွားဖြစ်တင်ထားသောဓာတ်ပုံများကိုသင်ရနိုင်သည်။ Picreco ဓါတ်ပုံများကို၎င်းကိုအသုံးပြုလိုသူမည်သူမဆိုကူးယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဓာတ်ပုံများပို့စရာမလိုသောကြောင့်အဆင်ပြေသည်။ ...
အမှတ် ၁၄၃၁၁ [Mifuneyama ပရဒိသုဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်ပွဲတော်] ယနေ့ Mifuneyama Rakuen ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်ပွဲတော်သည်နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှစ၍ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည် Mifuneyama Pass, 150,000 tsubo ကျရှုခင်း ညတွင်ဂျပန်၌အကြီးမားဆုံးဆောင်း ဦး အရွက်များထွန်းလင်း။ ကန်ထဲရှိဆောင်း ဦး ရွက်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်ဖြစ်သည်။ ️ ထိုကာလအတောအတွင်း Oginoo Teahouse တွင်သင်သည်ဖက်ထုပ်နှင့်ဇန်ဇိုင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်သည် ကျေးဇူးပြုပြီးထွက်သွားပါ♪ヽ (´▽｀) / [2019 ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်ပွဲတော်] သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်အထိ ...
အမှတ် ၁၄.၂၇၇ [Takeo အထူး Remo Shabu ဟော့ပေါ့] ဆောင်း ဦး သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီးနံနက်နှင့်ညနေခင်းများတွင် ပို၍ အေးလာသည်။ ဒီနေ့“ Remo Shabu Nabe” ကို“ Shunsai Cooking Konomi” မှ Lemongrass နှင့်ဆော်လမွန်သုံးပြီးမိတ်ဆက်ပါမည်။ သံပုရာမြက်နှင့်ဆော်လမွန်တစ်အရသာရှိသောပူပြင်းသည့်အိုး၊ Takeo ၏အထူးထုတ်ကုန် ️ အနံ့မပါသောဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသောဟင်းချိုနှင့်အရသာရှိသောဟင်းချို အဆိုပါ miso ချက်ပြုတ်လက်ရာမြောက်သော! ️‼ ️ အားလုံးတတ်နိုင်သမျှ ~ 💕♪ヽ (´▽｀) / [Season Aya Konomi] ⠀ ...
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! Romon နံနက်စျေးကိုယနေ့ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
ယခုလနို ၀ င်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ (အားလပ်ရက်) အထိ၊ "Team Lab Kami-sama Forest" အထိ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသတင်းမီဒီယာများနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့တွင်ပြသသည့်ကြီးမားသောကျယ်ပြန့်သောပြင်ပပြပွဲ“ Team Lab Kami-sama no Mori” ကိုယခုနိုဝင်ဘာ ၄ ရက်အထိကျင်းပသည်။ ...
Mifuneyama Rakuen (Takeo Onsen, Kyushu) ရှိ“ Team Labo Kami-sama Forest Ruins and Ruins-the time of the time” တွင်နေ့ခင်းဘက်ခင်းကျင်းပြသမှုကို favorable ည့်ခံကြိုဆိုမှုကြောင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ Mifuneyama Rakuen ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်ပွဲတော်နှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်အထိ နေ့ခင်းဘက်ပြပွဲတွင်နေ့နေဝင်ချိန်အထိ Mifuneyama ပရဒိသု၏အပျက်အယွင်းများနှင့်အပျက်အယွင်းများသို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်အကြီးစား“ ယုယု၏အပျက်အယွင်းများရှိ Megalith” အပါအဝင်အဖွဲ့လိုက်ဓာတ်ခွဲခန်းလေးခုကိုသင်တွေ့ကြုံနိုင်သည်။ ...
Mifuneyama Rakuen“ ဆောင်း ဦး အရွက်ပွဲတော်” သည်ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်) မှစတင်သည်။ တောင် Mifune-no-Mori, ဆောင်း ဦး ရှုခင်းသည်ဆူနာမီ ၁၅၀,၀၀၀ သို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ နှင့်ဂျပန်၏အကြီးဆုံးဆောင်း ဦး အရွက်များလင်းလာသည်။ “ ဆောင်း ဦး ရာသီ” အရောင် (2018/11/07) အောက်ပိုင်းဥယျာဉ်:2မိနစ်အထက်ဥယျာဉ်: 1 မိနစ် ကာလ: 11 / 8-12 / 8 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၈း၀၀ မှ ၂၂ နာရီ (၁၇း၃၀ မှအလင်းရောင်) ...
[Saga စီရင်စုအာကာသသိပ္ပံပြတိုက်မှအသိပေးချက်] ယနေ့အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် (Sat) မှအရာအားလုံး၏ဇာစ်မြစ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက်“ Elemental Exhibition” ဆောင်း ဦး / ဆောင်းဆောင်းပြပွဲကိုကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ဒြပ်စင်များသည်“ စကြာ ၀ inာရှိအရာဝတ္ထုများ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ” ဖြစ်သည်။ ဒီပြပွဲပြီးနောက် element တွေကိုပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခံစားကြပါစို့။
[Saga စီရင်စုအာကာသသိပ္ပံပြတိုက်မှအသိပေးချက်] ကံမကောင်းစွာဖြင့်ယနေ့နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာရေးဂြိုလ်ကိုကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ https://www.yumeginga.jp/
[Saga စီရင်စုအာကာသသိပ္ပံပြတိုက်မှအသိပေးချက်] အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်မှ (စနေ) အထိ“ Elemental Exhibition: All အရာရာများ၏ဇာစ်မြစ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း” ဆောင်း ဦး - ဆောင်းရာသီပြပွဲကိုကျင်းပလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ဒြပ်စင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်သောပုံစံဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ အဘိတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်နေသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးပြတိုက်ကိုလာပါ။ https://www.yumeginga.jp/220_sp_exhibition/2019element/index.html
[Saga စီရင်စုအာကာသသိပ္ပံပြတိုက်မှအသိပေးချက်] ဒီနေ့နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ နို ၀ င်ဘာ၏အဓိကအကြောင်းအရာမှာ“ လ (အသက် ၅.၀ လ)၊ စနေဂြိုဟ်၊ အချိန် - ၁၉:၀၀ မှ ၂၀း၃၀ (reception ည့်ခံချိန် ၂၀း၀၀ အထိ) ထိုကြယ်သည်လှပသောရာသီဖြစ်လာသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုနွေးထွေးစွာ ၀ တ်ဆင်ပါ (* ^ _ ^ *)
[Saga စီရင်စုအာကာသသိပ္ပံပြတိုက်မှအသိပေးချက်] အာကာသသိပ္ပံပြတိုက်သည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်“ Elements Exhibition” အထူးပြပွဲကိုကျင်းပနေသည်။ ! မနက်ဖြန် ၁၁/၁၀ (တနင်္ဂနွေ) သည်သက်ဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေဖြင့်အချိန်ကာလအဆက်အသွယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျင်းပလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Periodic table paper များ၊ အက်တမ်နံပါတ်အမြန်ရည်ညွှန်းအုပ်စိုးရှင်များနှင့်အက်တမ်နံပါတ်များကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပေးသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ ကထိက - Mr. Nagayasu Nawa အချိန် - 13: 00-14: 00 ...
အမှတ် ၁၄၂၄၂ [Yasuhiro Watajima Pottery Exhibition ၏သတိပြုပါ] ယနေ့အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင် Yasuhiro Watajima အိုးအိမ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည် ၎င်းကို Saga ရှိ Kodenji ၏ရှေ့မှောက် Muraokaya ပြခန်းတွင်ပြလိမ့်မည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပြည့်ဝအံ့သြဖွယ်ရေယာဉ်များတစ်စီးရီး ကျေးဇူးပြု၍ လာပါ♪ヽ (´▽｀) / [Muraokaya ပြခန်းရှိ Yasuhiro Watajima အိုးပြပွဲ]
၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ၀၂:၄၀
အမှတ် ၁၄.၂၅၅ [Kikura ကိုရွေးပါ။ အဆောက်အ ဦး အသစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ပါ။ ] Takeo Onsen အဆောက်အအုံသစ်တွင်အမျိုးသားရေးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်သည် "Kizo" ဖွင့်လှစ်! Takeo ကောင်းသောအရာအများကြီး ကျေးဇူးပြုပြီး drop ヽ (´▽｀) / in ⠀ [ဆိုင်ခွဲတစ်ခုရွေး Kizo Takeo Onsen] Takeo 7425, Takeo-cho, Takeo ရုံးချိန် 9: 00-18: 00⠀ ပုံမှန်အားလပ်ရက်အင်္ဂါနေ့
အမှတ် ၁၄၂၃၂ [အမည်းရောင်နတ်ကွန်းကိုအပ်နှံခြင်း] အခြားနေ့၌ကျင်းပသော“ Takeo no Yabusuma” အပြီးတွင်“ Kuroge Shrine no Yabusuma” ကိုမနက်ဖြန်အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်အင်္ဂါနေ့တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ၁၁၄၄ ခုနှစ်တွင်အနက်ရောင်ဆံပင်တောင်ကိုပျက်စီးစေခဲ့သောမြွေကြီးသည် Hachiro Jinsai ၏အပ်နှံမှုကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ နံနက် ၁၀း၀၀ မှနှစ်စဉ်ကျင်းပသောပွဲတော်ကိုညနေ ၁း၃၀ မှမွေးကင်းစနှင့်ကလေးငယ်များကိုစုသိမ်းလိမ့်မည်။ ...
အမှတ် ၁၄၁၁၁ [ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီအထူးပြပွဲ -“ အရာအားလုံး၏မူလအစရှာဖွေခြင်း” ယနေ့ 10/26 (Sat) Saga အာကာသသိပ္ပံပြတိုက်၌ ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီအထူးပြပွဲ“ Elemental Exhibition” - အရာအားလုံး၏ဇစ်မြစ်ကိုလေ့လာခြင်း ဒြပ်စင်များ၏ကျက်သရေကို International Periodic Year after ပြီးနောက်မိတ်ဆက်ပါမည် အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပျော်စရာစာသင်ခန်းများစွာရှိသည်။ ️ ကျေးဇူးပြုပြီးပြတိုက်ကိုလာပါ။ ♪ヽ (´▽｀) / [Elemental ပြပွဲ - အရာရာ၏ဇာစ်မြစ်ကိုစူးစမ်းခြင်း] အချိန်ကာလ ...
အမှတ် ၁၄.၂၂၂ [ဟီဂစ်စကာဝါနိုဘိုရူCosာမော့စ်အဝေးပြေးလမ်းကိုတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်] ⠀ Nozomi Higashikawa ၏ Cosmos လမ်းသည်အပြည့်အ ၀ ပွင့်လန်းနေသည် ⠀ ဆောင်း ဦး လေပြေတိုက်ခတ်စဉ်“ Takesanpo Higashikawa တောင်တက်သင်တန်း” ကိုသင်ဘာကြောင့်မသွားနိုင်သနည်း